साझाले सम्झयो स्रष्टा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
पुस १४, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
ललितपुर — नेपाली साहित्यका अग्रज सष्ट्राहरूलाई साझा प्रकाशनले बुधबार सम्मान गरेको छ । संस्कृतिविद् एवं शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे र वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितलाई साझा सम्मान दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी तीन स्रष्टालाई जनही २५ हजार १ सय १ रुपैयाँसहित ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले लेखक एवं समालोचक निनु चापागार्इँको ‘पूर्ववाद र सइदेली विचार’ र प्रा.डा. ताराकान्त पाण्डेयको ‘माक्र्सवाद, सांस्कृतिक अध्ययन तथा साहित्यको समाजशास्त्र’ पुस्तक लोकार्पणसमेत गरे ।
नेपाली साहित्य, संस्कृति, भाषा र मनोविज्ञान निर्माणको क्षेत्रमा साझा प्रकाशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे । साझाको भवन अवलोकनपछि दाहालले सरकारले साझाको जीर्ण भवनहरू निर्माणका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।
साझा प्रकाशनको १ सय ५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक साहित्यका अग्रज सष्ट्राहरूलाई सम्मान गर्न पाएको साझाको महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । ‘साझामा २२ करोडका पुस्तकहरू स्टकमा छन्,’ उनले भने, ‘यी पुस्तकको बिक्रीवितरणसँगै नयाँ पुस्तकहरूको प्रकाशनमा जोड दिने कोसिस हुनेछ ।’ मंसिर २६ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले साझालाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान र २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएकोमा पुरानो ऋण तिरेर बाँकी रहेको रकमले पुस्तक प्रकाशनको लागि आधुनिक मेसिन खरिद गर्ने उनले जनाए ।
राष्ट्रकवि घिमिरेले चाहिँ ‘सम्मान पाइएला भनेर साहित्य सिर्जना गरेको होइन’ भन्दै नेपाली भाषासाहित्य जोगाउनतिर सुझाए । राजनीतिज्ञ एवं माक्र्सवादी सौन्दर्य चिन्तक मोहन वैद्य किरणले लोकार्पित दुवै पुस्तकले ‘उत्तर आधुनिकतावाद र उत्तर–उपनिवेशवादका साथमा समाजवादी चिन्तन प्रस्तुत गरेको’ दाबी गरे । दुवै पुस्तक साझाले नै छापेको हो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा. कृष्णहरि बरालले सम्मानित स्रष्टाहरूबारे प्रकाश पारेका थिए । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, रञ्जु झा, दीनानाथ शर्मालगायतले साझा र स्रष्टाबारे धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७३ ०९:४३
काठमाडौं — लामो समयदेखि चलचित्र निर्माता संघ विवादित बन्दै आएको छ । विवाद यतिबेला जिल्ला प्रशासन हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनले संघको साधारण– सभा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यसअघि पुस २ मा डाकेको साधरणसभा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ‘आर्थिक अनियमितताको छानविन नसकिएको’ भन्दै रोकेको थियो ।
राजकुमार राई अध्यक्ष रहेको संघले ६ लाख रुपैयाँ तिरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुस ३ गते अन्य कागजात पनि बुझाएपछि ढोका खुलेको थियो र संघले आउँदो शुक्रबारलाई साधारणसभा डाकेको थियो । तर, ‘बाँकी हिसाब साधारणसभाबाट क्लियर गरेर ल्याउँछु भनेकै भरमा साधारणसभाको ढोका खोलिदिएको’ भन्दै निर्माता नवराज खड्का (नवल) ले उच्च अदालत मुद्दा दायर गरेपछि बुधबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
आदेशमा ‘संघको विधान, २०५५ को दफा १३ (ख) मा साधारण सभा बोलाउँदा कम्तीमा २१ दिनअघि बैठक बस्ने स्थान, मिति, समय र छलफल हुन तोकिएको विषयको कार्यसूची–सहितको सूचना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सोबमोजिम नभएको साधारणसभा सम्पन्न नगर्नू/ नगराउनू’ उल्लेख छ । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदी, दधिराम ढकाल र सन्तोष राउतले बहस गरेका थिए ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७३ ०९:४२